Fifaninanana hatsaram-bika sy tarehy :: Raikitra ny savorovoro eo amin’ireo « Miss Madagascar» sy ny mpikarakara • AoRaha
Fifaninanana hatsaram-bika sy tarehy Raikitra ny savorovoro eo amin’ireo « Miss Madagascar» sy ny mpikarakara
Nanaitra ny rehetra ny fanambaràna nataon’i Valérie Anne Binguira, izay lany « Miss Madagascar 2019 ». Nanameloka ny komity mpikarakara ny fifaninanana izy tamin’ny fomba nitantanan’izy ireo ny fandaharam-potoan’ity « Miss Madagascar » ity raha ny nambarany tetsy amin’ny La Terasse Antanimena, omaly.
Tsy ny tamin’ity taona ity ihany, raha ny fanazavana azo, no nisian’ny olana fa efa miverimberina tamin’ireo andiany teo aloha izany. Tonga nanamafy izany moa ny “Miss Madagasikara 2017 sy 2015”.
Raha «Tokony handray anjara amin’ny Miss Monde any Londres aho amin’ny volana desambra 2019. Efa anatin’ny « Top 20 » isika raha ny filaharana navoakan’ny « Miss Earth 2019 ». Efa tamin’ny volana marsa 2019 no nanapaka ny fifandraisana tamiko ny komity mpikarakara. Ny tsy fanekeko hamerenana ny samboady amina olona tsotra tsy ao anatin’ny mpikarakara no tena antony satria nangataka ny hamerenana izany amin’ny fomba ofisialy aho», hoy ny fanazavan’i Valérie Anne Binguira.
Raha ny fanazavan’i Njara Windye Houarris, “Miss Madagascar 2017” sy Ranto Harisoa Christiana, “Miss Madagascar 2015” dia efa tamin’ny fotoana nahalany azy ireo no nisy ny korontana tamin’ny fandraisana anjara amin’ireo fifaninanana maneran-tany sy ny sahan’asa izay tokony hatao eto an-toerana.
Nanolotra fanazavana ny teo anivon’ny komity mpikarakara ary nanamafy fa misy ny lalàna mifehy ny « Miss Madagascar » ary manana reny mpiahy ny andiany tsirairay manoro azy ireo izay tokony hataony. « Manome fahalalahana ny ankizy izahay. Mianatra ary mila tsy elingelenina ireo ankizy ireo. Manentana azy ireo hatrany izahay hanohy ny fianarany. Ireo hetsika goavana ihany no hiantsoanay azy ireo. Misy fandaminana ihany koa ny fandraisana anjara amin’ny fifaninanana maneran-tany samihafa», hoy ny fanazavan’ny mpikarakara. Nanampy izy fa misy tsy fifankahazoana teo amin’ny famaritan’ny mpikarakara ireo loka izay omena sy ny fiheveran’ny ankizy izany. Mbola hanolotra fanazavana bebe kokoa ny mpikarakara raha ny nambarany ary hanolotra ireo porofo rehetra mahakasika ity raharaha ity.